Musuq-maasuqa Qarsoon iyo kan muuqdo keebaa halis badan | Saadaal Media
Musuq-maasuqa Qarsoon iyo kan muuqdo keebaa halis badan
Apr 12, 2017 - jawaab
Dalka soomaaliya wuxuu ku caan baxay musuq-maasuq iyo wax is dabamarin, wuxuuna dhowr sano ah oo xariir ah qaatay koobka musuqa aduunka. Arintaan maahan mid ay moogyihiin dadka soomaaliyeed balse waxay u arkaan caqabada ugu weyn ee horumarka iyo amniga dalka haysato inay tahay musuqa baahsan ee ka jira dalka iyo lunsashada xoolaha shacabka ee ay caadaysteen madaxdu.
Balse waxaan lagu baraarugsanayn inuu musuqa hadda noo muuqdo uu yahay mid faaiido leh, halisna yar marki la garab dhigo kan aan inoo muuqan ee saameeyay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Inta aanan u gudbin musuqa qarsoon bal marka hore aynu qeexno waxa la yiraahdo musuq-maasuq.
Musuq-maasuq waa daacad la’aan iyo khiyaamo ay galaan kuwa awooda leh gaar ahaan kuwa ku jiro xafiisyada dowlada iyo adeega dad-weynaha. Wuxuu noqon karaa mid laaluush maaliyadeed lagu kala qaato ama waji garad, macrifo loo maro qof kale iyo nin jeclaysi loogu sad buriyo wax uusan qof xaq u lahayn. Waxaa sidoo kale, musuq ah gudasho la’aanta xil ama shaqo laguu igmaday taasoo ay dhici karto inuusan qof ku qaadan wax maal ah balse uu lunsado waqtigii uu dadka ugu adeegi lahaa. Waa midaan danbe tan aan rabo inaan halkaan kaga hadlo.
Lunshada waqtiga dad waynahu waa mid ka halis badan lunsasho maaliyadeed. Dadku uma arkaan inay tahay danbi xak Eebe, sidoo kale uma arkaan khiyaamo qaran iyo mid dad-weyne toona. Taas waxay keentay in qof walba uu ku tagri falo waqtigii loogu talagalay inuu ummada ugu adeego cid kula yaabtana aysan jirin. Meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan lunsashada waqtigu waxaa ka mid ah isbitaalada dowlada yo kuwa ay ha’adahuhu gacanta ku hayaan (war badan kama hayo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay), iyo dhamaan goobaha wax barashada.
Waxaan sanadkii hore safar gaaban ku tagay dalkeena meelo ka mid ah. Waxaan booqday dhowr dugsi oo kala duwan anigoo waliba sii ogaysiiyay inaan imaan doono barri. Waxaa I yaab galiyay in maamulaha iskoolka ahaa qofkii ugu danbeeyay ee yimaado iskoolka. Sidoo kale, waxaan booqdday mid kale waqtigii laga soo noqon lahaa fasaxa quraacda. Markii ay ardadu kusoo noqdeen fasalada ayna sii amba qaadi lahaayeen casharadooda, macalimiinta qaar ayaa wali sii maqnaa. Wax yaabaha iga yaabiyay ayaa ahaa in maamulaha iyo macalimiinti toona aysan u arag inay wax qalad ah ku jiraan. Markaan isku dayay inaan u iftiimiyo inay musuq iyo is-dhaadhaafis ku hayaan iskoolka, arada, waalidiintood iyo dhamaan dalka, waxay igala hor yimaadeen diidmo iyo dood ah inaan tanoo kale la dhihin musuq.